Goodax oo siyaasadeeyay ka haritaanka Hirshabelle ee tartanka kubadda cagta | Dhacdo
Home Wararka Maanta Goodax oo siyaasadeeyay ka haritaanka Hirshabelle ee tartanka kubadda cagta
Goodax oo siyaasadeeyay ka haritaanka Hirshabelle ee tartanka kubadda cagta
Wasiirkii hore ee Waxbarashada Somaliya ahna Xildhibaan ka tirsan Golaha Shacabka, Cabdullaahi Goodax Barre ayaa ka hadlay guuldarada ciyaartoyda Hirshabelle ka soo gaartay ciyaartii galabta dhex martay kuwa Galmudug.
Ciyaartoyda Galmudug ayaa 2-1 uga badiyay dhigooda Hirshabelle, iyadoona kooxda Galmudug ay hadda leedahay afar dhibic, labadii kulan ay ciyaartay tartanka koobka kubadda cagta ee ka socda Magaalada Muqdisho, halka kuwa Hirshabelle aanay wax dhibic ahi ka keenin labadii kulan ay ugu dambeysay, taasoo ka dhigan inay ku hartay heerka Group-yada.
Ciyaartoyda Hirshabelle ayaa labadii kulan ay ciyaareen waxay wajaheen kooxaha Gobolka Banaadir iyo Galmudug, oo ay ku wada jireen Group A. Kulankii ay la ciyaareen kooxda Gobolka Banaadir ayaana looga badiyay 1-0. Kooxaha Galmudug iyo Banaadir waxay leeyihiin min afar dhibic.
Xildhibaan Cabdullaahi Goodax Barre ayaa sheegay in Hirshabelle oo noqoto kooxdii ugu horeysay ee tartanka ka harta ay direyso farriin si cad loo wada sawirran karo.
“Waxaan u hambalyeynaya ciyaartoyda Galmudug guusha ay gaareen. Hirshabelle in laga badiyay kulamadii ay ciyaartay, eber-na ay la laabato, taageerayaal badanna haysan, isla-markaana ay noqoto maamulkii u horeyay ee ka hara tartanka, waxay diraysaa farriin cad oo la wada sawirran karo.” Ayuu yiri Xildhibaan Goodax oo warkan ku sheegay bartiisa Twitter-ka.
Goodax ayaa horaantii bishan si kulul u weeraray Madaxweynaha cusub ee Hirshabelle, Cali Cabdullaahi Xuseen (Cali Guudlaawe), waxaana uu ku tilmaamay mid aan hoggaamin karin reer Hirshabelle.
“Hadda waxaa jira nin la yiraahdo Cali Guudlaawe, uma arko xitaa shakhsi wanaagsan oo madax noqon karo. Maxaa yeelay waan aqaanaa hortiisaana ka sheegay. Waa dadka miyiga ku soo weynaaday oo jecel inuu qabiil ka shaqeeyo, maantoo dhan mashquul ku ahaado qabiil, waana nin neceb isir, isir neceyb uu ku jiro, mana xamanayo hortiisaan ka iri, ayadoo Madaxweynihii isaga ka horeeyay iyo asxaab kaloo badan ay wada fadhiyaan ayaa waxaan u sheegay nin yahow neceybka isirka ah iska jooji.” Ayuu xilligaa yiri Goodax.
Hase ahaatee siyaasadeyntiisa xilligan ee ka haritaanka kooxda Hirshabelle ee tartanka koobka kubadda cagta waxay imaaneysaa, iyadoo ciyaaruhu ka madaxbannaan yihiin arrimaha siyaasadda, looguna talagalay is dhexgalka bulshada.
Previous articleWariye Dulyar: Reer Beledweyne waa gob, waana mahadsan yihiin
Next articleDiyaaradaha dagaalka Mareykanka oo garaacay Degmada Saakow